Filimka Will Smith ee "Xorriyadda" Apple TV + wuxuu raadinayaa goobo cusub | Waxaan ka socdaa mac
Filimka Will Smith ee "Emancipation" ee Apple TV + wuxuu raadinayaa goobo cusub
Bishii Luulyo ee la soo dhaafay, waxaan daabacnay sheeko warar ah oo la xiriirta waxyaabaha cusub ee ku soo socda Apple TV + jilayaal caan ah. Waxaan ka hadleynaa filimka Xorriyadda, waxaa jilaya Will Smith, oo uu hogaaminayo Antoine Fuqua iyo kaasoo filimkiisa loo qorsheeyay inuu ka bilowdo Georgia bisha Juun.
Si kastaba ha noqotee, Will Smith iyo agaasimaha, Antoine Fuqua, labaduba waxay bedeleen fikirkooda sababtoo ah Sharciga cusub ee xaddidaya cod-bixinta ee Georgia. Markii hore, Tim Cook wuxuu mar horeba ka hadlay sharciga cusub ee gobolkan xaddidaya helitaanka codbixinta.
Sida aan ka akhrisan karno Reporter Hollywood The, Filimka Xorriyadda waa wax soo saarka ugu weyn ee ugu horeeya ee baxa gobolka sababtoo ah sharcigan cusub. Bayaanka Will Smith iyo Antoine Fuqua ay u direen warbaahinta, waxaan ka aqrisan karnaa:
Waqtigan xaadirka ah, ummaddu waxay la heshiinaysaa taariikhdeeda waxayna isku dayeysaa inay ka saarto astaamaha cunsuriyadda hay'adaha si loo gaaro caddaalad jinsi run ah.
Anagu damiir ahaan kuma bixin karno taageero maaliyadeed dowlad meel marisa sharciyada dib u celinta codbixinta ee loogu talagalay in lagu xakameeyo marin u helka cod bixiyaasha.
Sharciyada cusub ee codbixinta Georgia waxay xusuusinayaan baararka codbixinta ee la ansixiyay dhamaadka Dib-u-dhiska si looga hortago in badan oo Mareykan ah inay wax doortaan.
Nasiib darrose, waxaan dareemeynaa in lagu qasbay in aan u wareejino shaqadeena filim soo saarista filimka Georgia illaa gobol kale.
Xoriyada ayaa jilaysa Will Smith doorka a adoon cararay Safar dhib badan oo xagga woqooyi ah, halkaas oo uu kaga mid noqonayo ciidanka Midowga. Waxaa qoray William N. Collage, filimku wuxuu ku saleysan yahay sheeko run ah.
Apple xuquuqda filimka wuxuu ku iibsaday $ 100 milyan. Iyadoo la tixgelinayo in waxsoosaarka loo qorsheeyay bisha Juun, filimku wuxuu u badan yahay inuu dib u dhigayo taariikhda la siidaayo labada tiyaatar iyo Apple TV +.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Filimka Will Smith ee "Emancipation" ee Apple TV + wuxuu raadinayaa goobo cusub
Dhacdada Apple ee Abriil 20 ayaa hadda rasmi ah
Sheeko Xirfadeed Xilli Ciyaareed Laba Filim Oo Hadda La Heli Karo